March 2016 – Oway Trip
MPU ကဒ်တွေ အသုံးပြု ပြီး Online ကနေငွေပေးချေလို့ရအောင် oway.com.mm မှာ Register လုပ်ပါ .
မိမိ MPU ကတ်အား oway.com.mm မှ MPU E-commerce အကောင့်အား တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားလို့ရပါတယ် ။ . ၁။ oway မှာ ဟိုတယ်များ၊ လေယာဉ်လက်မှတ်များ ၊ ကားလက်မှတ်များ ၊ ကားအငှားဝန်ဆောင်မှုများ နှင့် စရိတ်ငြိမ်းခရီးစဉ်များ ထဲမှ မိမိ နှစ်သက်ရာ ၀န်ဆောင်မှုများအားဝယ်ယူပါ။ ဆက်လက်ပြီး ငွေပေးချေရန် ဖော်ပြပါ Button များကိုနှိပ်၍ ဆက်သွားပါ။ ထို့နောက် Payments ရွေးသည့် page တွင် MPU ကို ရွေးချယ်၍ Pay button ကိုနှိပ်ပါ ။ မိမိ MPU ကတ်အား oway.com.mm မွ MPU E-commerce အေကာင့်အား တိုက်ရိုက်လွေ်ာက္ထားလို့ရပါတယ် ။ ….
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဂူကြီး Son Doong
ဒီတစ်ခါ Oway စာဖက်ပရိတ်သတိကြီးကို မြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်ကနေ စွန့်ခွာပြီး ထူးခြားဆန်းပြားနေရာသစ်လေးတစ်ခုဆီကို ခေါ်ဆောင်သွားချင်ပါတယ်။ အဲဒီနေရာကတော့ Son Doong ဂူ ပဲဖြစ်ပါတယ် . Son Doong ဂူကို ဘာလို့ထူးခြားတယ်လို့ ပြောတာပါလဲ လက်ရှိ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဂူကြီးဖြစ်လို့ပါပဲ။ ဗီယနမ် နိုင်ငံ၏ အလယ်ဗဟို Quang Binh ပြည်နယ် တွင်တည်ရှိ တဲ့ ဒီဂူကြီး ကို Ho-Khanh ဆိုသူ ဗီယနမ်လူမျိုး တစ်ဦးမှ ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် အမှတ်မထင် ရှာဖွေတွေ့ ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။၂၀၀၉ ခုနှစ် ဧပြီလ မှာ ဗြတိန် လှိုင်ဂူစူးစမ်းရှာဖွေရေး အဖွဲ့(British Cave Research Asociation) ကနေ ဂူကြီး၏ အတိုင်းအတာနှင့် အတွင်းဘက် ကို…
လည်ပတ်လေ့လာ ဗြူနိုအေးရိစ် ကမ္ဘာ
ဗြူနိုအေးရိစ် မြို့တော်ကြီးဟာ တောင်အမေရိကတိုက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံ၏ မြို့တော်ကြီးဖြစ်ပြီး ဥရောပအငွေ့အသက်တွေအပြည့်အဝပေးနိုင်တဲ့ မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ မြို့တော်ကြီးရဲ့ အနီးအနားမှာပဲရှိတဲ့ လာဗိုကာ (La Boca) နှင့် ဆန် တဲလ်မို (San Telmo) မြို့လေးတွေရဲ့ အီတလီအငွေ့အသက်တွေကိုလည်းခံစားနိုင်သလို စပိန်လူမျိုးစုတို့ရဲ့ လှုပ်ရှားသက်ဝင်နေတဲ့ ညအလှတွေကိုလည်း ခံစားနိုင်ပါသေးတယ်။ ဗြူနိုအေးရိစ် မြို့တော်ကြီးရဲ့ စိတ်ကိုညှိ့ငင်ဖမ်းစားနိုင်တဲ့ အကအလှတွေကလည်း သင့်စိတ်မပျံ့လွင့်သွားအောင် ညှိ့ယူလို့နေပါလိမ့်မယ်။ မြို့တော်ကြီးရဲ့ အနုပညာထွန်းကားမှုတွေ၊ ဖန်တီးမှုအားကောင်းတဲ့ အနုပညာချယ်သမှုတွေနှင့် အရသာထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ အစားအသောက်လက်ရာတွေစသည်တို့ကို ငယ်ရွယ်ပြီး ထူးချွန်တဲ့ လူငယ်အနုပညာရှင်တွေနှင့် စားဖိုမှူးလေးတွေက အစွမ်းပြဖြည့်စွက်လို့နေပါတယ်။ ဒီလိုသာယာမှုတွေကြောင့်လည်း မှင်သက်ရှုမောဖွယ်ကောင်းတဲ့ အလှအပပေါင်းများစွာနှင့်ပြည့်နှက်နေတဲ့ ဥရောပနိုင်ငံများမှ လူတွေကတောင် ဗြူနိုအေးရိစ်မြို့ကြီးကို တကူးတကလာရောက်လည်ပတ်ကြပါတယ်။ ငယ်ရွယ်သူစုံတွေများရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းပေါင်းများစွာဟာလည်း ဗြူနိုအေးရိစ်မြို့ကြီးကနေတစ်ဆင့် ပေါက်ဖွားလို့နေပါတယ်။ သွားလာလည်ပတ်စရာတွေလည်း များပြားလှပြီး အနည်းဆုံး…
ပျော်ရွှင်စရာ မိသားစုခရီးလေးတစ်ခုဖြစ်စေရန် မဖြစ်မနေသိထားသင့်သော အချက် (၆) ချက်
ပျော်စရာ ခရီးလေးတစ်ခုဟာ မိသားစု စုံလင်ရင်ပိုကောင်းပါတယ် မိသားစုထဲမှာ ကလေးငယ်လေးတွေ ပါလာရင်တော့ လမ်းခရီးမှာ ပိုဂရုစိုက်ရပြီး၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ် မရှိတော့တဲ့အတွက် ကလေးငယ်တွေကို အိမ်မှာ ချန်ထားတက်ချင်ကြပါတယ်. ဒါပေမယ့် စိတ်ဘယ်ကောင်းပါ့မလဲဗျာ. ဒါဆိုနည်းလမ်းကောင်းလေး (၆) ခုရှိပါတယ် .(၆)ခု တည်းပါ. ဒီနည်းလမ်းလေးတွေကို လိုက်နာမယ် ဆိုရင် မိသားစုစုံစုံလင်လင် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နဲ့ အကောင်းဆုံး အမှတ်တရတွေ ကျန်ရစ်မဲ့ ခရီးလေးတွေကို ဖန်တီးနိုင်ပြီပေါ့ .. (၁) လက်ကိုမကြာခဏဆေးပေးပါ မိမိ ရဲ့ လက်ကိုရော ကလေးငယ်တွေရဲ့ လက်ကိုရော မကြာခဏဆေးပေးပါ .အစားမစားမီ / စားပြီး နဲ့ ရေအိမ်မှ ထွက်လာချိန်တွေမှ မဟုတ်ပဲ ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်မှာ ဂရုတစ်စိုက်ဆေးပေးဖို့ပါ. (ဥပမာ – ကားတက် ကားဆင်း .ခရီးသွားအသုံးအဆောင်တွေကို…
Korea နိုင်ငံရဲ့ No-1 အပန်းဖြေဥယျာဉ် Everland
ကိုးရီးယားနိုင်ငံ ရဲ့ အကျော်ကြားဆုံး အပန်းဖြေဥယျာဉ် တစ်ခုဆိုတာ ငြင်းဆိုစရာမရှိပါဘူး။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ လာရောက် လည်ပတ်သူ (၇)သန်းကျော် ရှိနေပြီး ကျောင်းပိတ်ရက် ၊ ရုံးပိတ်ရက် တွေ နွေရာသီ ကာလတွေ မှာ ဆိုရင်တော့ များပြားလှတဲ့ ရောင်စုံလူအုပ်ကြီးတွေဟာ ဒီ ဥယျာဉ်ထဲမှာပြည့်လျှံနေတက်ပါတယ် ။ ဒီလို (၇)သန်းကျော် သော လူတွေကို Everland ကဘယ်လိုဆွဲဆောင်ထားတယ် လို့ထင်ပါသလဲ ? Everland Tree: ဥယျာဉ်ထဲကို ၀င်ဝင်ချင်းတွေ့မြင်ရမဲ့ Everland သစ်ပင်ကြီး ကတော့ (၁၃) မီတာ အမြင့်ရှိပါတယ်။ ဓါတ်ပုံရိုက်တာ ၀ါသနာပါတဲ့ သူတွေကို ဆွဲဆောင်ထားပါတယ် ၊ “အပင်ကိုတစ်ပတ် ပတ် ပြီးရိုက်ပေတော့ဗျာ “။ ရာသီအလိုက် သစ်ပင်ကြီးမှာ ပြောင်းလဲအလှဆင်ထားတက်…
Oway ခရီးသွား ပရိတ်သတ် ကြီးကို “Sleeping in the rock” ဆိုတဲ့ .. စွန့်စွန့်စားစား ခရီးစဉ်တစ်ခု အကြောင်းကို ဝေမျှပေးချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ …. အိပ်ရာနိုး လို့ မျက်လုံးဖွင့်လိုက်ချိန်မှာ မြင်ဖူးနေကျ အခန်းနံရံတွေအစား မိမိဘေးမှာ မြင့်မားတဲ့ တောင်တန်းနံရံတွေနဲ့ ကျယ်ပြန့် တဲ့ကောင်းကင်ကြီးရဲ့ သဘာဝကျကျ အလှတရားတွေခံစားရင်းနိုးထမယ်လို့ စိတ်ကူးမိပါသလား? သင်တစ်ညတာ အိပ်စက် ရမဲ့နေရာက 90 ဒီဂရီ မတ်ဆောက်နေတဲ့ တောင်တစ်လုံးရဲ့ မီတာ နှစ်ထောင်အမြင့်မှာပါ.. ဒါဟာ တကယ့်ကို ထူးထူးခြားခြားစွန့်စားရမဲ့ မဟာစွန့်စားမှုကြီးပါပဲ..ခရီးစဉ်ရဲ့ နာမည်ကတော့ “Sleeping in the rock” ပါ.. စွန့်စွန့်စားစား ခရီးသွားချင်သူများအတွက်တော့ တကယ်ကိုယ်ကျေနပ်စေပြီး ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရမဲ့ ခရီးစဉ် မျိုးပါ. Germany…
သင့်အတွက် အမှတ်တရ ဟန်နီးမွန်းခရီးကို ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ ?
ဟန်နီးမွန်း ခရီးဆိုတာဟာ မင်္ဂလာပွဲကျင်ပပြီးနောက် အရေးအကြီးဆုံး အချိန်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ သင်နှင့်သင့်ချစ်သူ နှစ်ဦးတူနှစ်ကိုယ် သီးသန့် ဖြစ်သန်းရမယ့် ဘ၀ရဲ့ ရှားပါးအချိန်လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်ရဲ့ ဟန်နီမွန် လေးရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေဟာ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် သတိရနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဟန်နီမွန်းကာလ မှကြုံတွေ့ရမယ် ဆိုးကောင်း အဖြစ်အပျက်မျာ ဟာ ရှေဆက်ရမယ့်ဘ၀တွေအတွက် အလှည့်အပြောင်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ (၁) ချစ်သူနှင့် များများ တိုင်ပင်ပါ ချစ်သူနှင့် ဟန်နီမွန်း ခရီး အကြောင်း ထုတ်ဖော်တိုင်ပင်ပါ၊ သူနှစ်ကိုယ် အကြိုက်တူဖို့လိုပါတယ်၊ ဒါမှသာ ကိုယ်ခန်မှန်ထားတဲ့ ကုန်ကျငွေနှင့် ပြန်ရလိုက်တဲ ပျော်ရွင်မှုဟာ အတိုင်ထက်လွန်ဖြစ်မှာ သေချာပါတယ်။ ကိုယ်သွားမယ့် ဒေသရဲ့ ဈေးအသက်သာဆုံးကာလ ကိုရွေးချယ်တတ်ရပါမယ်။ သတင်းအချက်အလက် အလွယ်တကူရနိုင်တဲ့ကာလမို့ ခက်ခဲတဲ့ အလုပ်တော့မဟုတ်တော့ပါဘူး၊ သက်ဆိုင်ရာဒေသရဲ့ နေထူးနေ့မြတ်တွေ၊ အလုပ်ပိတ်ရက်တွေကို ရှောင်းရှားနိုင်ရင်…